Michael Peggs si Isiokwu na Martech Zone |
Edemede site na Michael Peggs
Michael Peggs bụ nchoputa nke Mgbasa Marccx, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ ọkachamara na SEO na Ahịa Ọdịnaya. Tupu Marcxx, Peggs rụrụ ọrụ na Google na mmepe azụmaahịa, na-akpụ mgbasa ozi dijitalụ na mmekọrịta mgbasa ozi. Ọ bụkwa blọgụ na pọdkastị, na-akwado iTunes Top 10 New & Podcast You University.
Olee Uru I Live Live Streaming For Akara Gị?
Tọzdee, Septemba 1, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Michael Peggs
Ka mgbasa ozi mmekọrịta na-aga n'ihu na-agbawa, ụlọ ọrụ nọ na-achọgharị maka ụzọ ọhụrụ nke ịkekọrịta ọdịnaya. N'oge gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ rapaara na ịde blọgụ na weebụsaịtị ha, nke nwere uche: Ọ bụ akụkọ ihe mere eme ka ọ dị ọnụ ala, dị mfe, na oge kachasị mma iji nweta mmata mmata. Ma na imata okwu edere ede ka di nkpa, ihe omumu n’egosi na imeputa ihe vidio bu ihe omuma n’enweghi akwukwo. Karịsịa, mmepụta nke 'ndụ